मांसहारी र शाहकारी बिच बहस, यस्ता छन् फाइदा र वेफाइदा ! सबैंको जानकारीका लागि सेयर गरौें-Nepali online news portal
मांसहारी र शाहकारी बिच बहस, यस्ता छन् फाइदा र वेफाइदा ! सबैंको जानकारीका लागि सेयर गरौें
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पनि मांसहारीको तुलनामा शाहकारीहरुको संख्या बढ्दैं गइरहेको छ । शाहकारी र मांसहारीका बिचमा कहिलेकाँही धार्मिक बहस पनि चल्ने गरेको छ । मांसहारीहरुले अन्य प्राणिको हत्या गरेको भन्दैं उनीहरुलाई पापीको संज्ञा पनि दिने गरिएको छ । यस विषयमा धार्मिक दृष्टिले बहस हुन सक्छ । तर, स्वास्थ्य र वैज्ञानिक दृष्टिले भने त्यति ठूलो बहस छैन । विभिन्न अनुसन्धानले पत्ता लगाइसकेको कुरा के हो भने मांसाहारीभन्दा कैयौँ गुणा बढी शाकाहारी भोजन फाइदाजनक हुन्छ र शाकाहारीको आयु पनि लामो हुन्छ ।
मासुले के गर्छरु मांसाहारीको तौल बढी हुन्छ । जसले गर्दा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बढी कोलेस्ट्रोलजस्ता रोग लाग्ने गर्छ । मांसाहारी मानिसलाई आन्द्रालगायत अरू क्यान्सरको पनि उच्च जोखिम हुन्छ । मांसाहारीलाई मुटुरोगको सम्भावना पनि बढी नैं हुन्छ ।
वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा मांसहारीमा कार्बोहाइड्रेट कम हुन्छ । प्रोटिन र मिनरल्सको मात्रा बढी हुन्छ । यी दुवै फाइदाजनक छ,तर, हुर्कंदै गरेका कुपोषित बच्चाहरूका लागि मात्र यस्तो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वस्थ व्यक्तिका लागि भने मासु खानु फाइदाजनक छैन । किनकि, यसमा बोसोको मात्रा हुन्छ । जसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ ।
अहिलेको अवस्थामा शरीरलाई फाइबरको आवश्यकता निकै बढी हुन्छ । यसले कोलेस्ट्रोल घटाउने काम गर्छ, फाइबर मासुबाट पाइँदैन । एउटा कुरा के भने मासुमा भिटामिन बी–१२ को मात्रा हुन्छ,जुन शाकाहारीबाट पाइँदैन । यो तत्वले नसासम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ । सबै शाकाहारी भोजनमा भिटामिन बी–१२ हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । मांसाहारीमा ओभर न्युट्रिसनको समस्या हुन्छ, जसले दूरगामी असर पार्छ । त्यसैले हामीले स्वाद र स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राखेर खानु जरुरी हुन्छ ।
मासु कसरी खाने ? आफ्नो शरीरको अवस्था के छ ? मासुबाट के–के तत्व पाइन्छ ? भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर मासुको प्रयोग गर्नुपर्छ । मासु आफैँमा हानिकारक भए तापनि धेरैले अत्याधिक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यदि खाइहाल्ने हो भने हप्तामा एक दिनभन्दा बढी खानु राम्रो होइन । कुनैं पनि कुराहरु धेरैं उपभोग गर्दा समस्या नैं हुन्छ, त्यसैंले परिमाणमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
मासु किन्दा यसको क्वालिटीको विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकदमै कम बोसो भएको मासु मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । मासु लिएपछि पकाउने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । नत्र शरीरलाई हानि पु¥याउँछ,ग्रिल, बेकिङ गरेर र माइक्रो ओभनमा पकाउँदा फ्राई हुन्छ र असर पनि कम गर्छ । मासुमा प्रयोग गर्ने तेलको मात्रालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मासु आफैँमा बोसो हुने भएकाले राखेको थप तेलले असर गर्छ ।
कहिल्यै पनि मासु मात्र प्रयोग गर्नुहुँदैन । त्यसको साथमा फाइबरयुक्त सलाद, सागलगायतको पनि सँगै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सकेसम्म रेस्टुरेन्टमा तयार पारेको मासुको प्रयोग नगर्नुहोला । रेस्टुरेन्टमा पाकेका खाना स्वस्थभन्दा पनि स्वाद र मुल्यलाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको हुन्छ । जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुर्याउँछ । रेड मिटको प्रयोग गर्नुहुँदैन,यदि गर्ने नै मन भए महिनामा एकपटक वा निकै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । खसी, राँगालगायतमा रेड मिट हुन्छ र यसमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा बढी हुन्छ ।
धेरैलाई लाग्छ कि चिकेन ह्वाइट मिट हो र यसले कोलेस्ट्रोल बढाउँदैन, जुन पुर्ण रुपमा गलत हो, यसमा पनि फ्याट हुन्छ । अन्डाको पहेँलो भागमा अत्यधिक कोलेस्ट्रोलको मात्रा हुन्छ,त्यसैले यसको पनि धेरैं प्रयोग गर्नुहुँदैन । माछाबाट अनस्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ, जसले मुटु र मोटोपनमा असर गर्दैन । यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । माछालाई यसलाई डिप फ्राई गरेर प्रयोग गर्दा भने यसको अनस्याचुरेटेड फ्याट नष्ट हुन्छ र स्वास्थ्यमा असर पुर्याउछ ।
डिप फ्रिजमा राखिएको ससेस, मःमजस्ता प्रोसेस्ड मिट खानेको संख्या पनि ठूलो छ, जुन स्वास्थ्यका लागि सबैंभन्दा धेरैं हानिकारक छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेहका रोगीले मासुको प्रयोग नै नगर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रुसोले भनेका छन्, “गो ब्याक टु नेचर” जब हामीले प्रकृतिलाई पछ्याउदैं जान्छौं, शाकाहारी खान्छौँ, तब हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो स्थितमा रहन्छ । संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली जनावरको रूपमा हात्तीलाई लिइन्छ तर हात्ती पूर्ण रूपमा शाकाहारी हो । एजेन्सी
भारतमा मोदीको लोकतान्त्रिक तानाशाह
संविधान दिवसकै दिन भोजपुरमा बम विष्फोट : संखुवासभामा बम भेटियो, घटनास्थलतिर सुरक्षाकर्मी प्रस्थान
विजुक्छे(रोहित) भन्छन्, ‘समाजवादकै चरणहरूबाट विश्व समुदाय एकदिन साम्यवादी समाजमा पुग्नेछ’
जलवायु परिवर्तनबिरुद्ध विश्वका १ सय ५६ देशमा एकै दिन लाखौंको र्‍याली (तस्बिरसहित)
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलनमा विप्लव नेकपाको समर्थन, हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी(विज्ञेप्ती)
नारायणमान बिजुक्छको गंभीर आरोप : प्रचण्ड नेपालका नेता हुन् कि दिल्लीका दूत हुन् चिन्न गाह्रो भो